सार्वजनिक खरीदका आधा दर्जन प्रावधान खारेज गर्न माग | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर सार्वजनिक खरीदका आधा दर्जन प्रावधान खारेज गर्न माग
जेठ ७, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले संशोधित ‘सार्वजनिक खरीद नियमावली–२०७५’ का ६ ओटा प्रावधानलाई सात दिनभित्र खारेज तथा संशोधन गर्न माग गरेको छ । महासंघले हालै सार्वजनिक भएको उक्त नियमावलीको छैटौं संशोधनका प्रावधानले निर्माण क्षेत्रलाई धरासायी बनाउने पनि बताएको छ ।
काठमाडौंमा मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले नियमावलीको नियम ४९ को कालोसूची, नियम ६५ को बोलपत्रको योग्यता र मूल्यांकन, नियम ६५ ‘क’ मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाउने, नियम १४५ ‘ख’को खरीदमा भाग लिन नपाउने प्रावधान खारेज गर्न माग गरेको छ । यस्तै, नियम ‘३१’ को उपनियम खरीदको योग्यता रू. २ अर्ब, शुरू सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप्ने प्रावधान खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
‘नियम १४१ को उपनियम ‘२’ को कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया पूरा नभएसम्म खरीद कारवाहीमा सहभागी हुन रोक लगाउने प्रावधान संशोधन तथा खारेज गर्न माग गरिएको छ । यस्तै, महासंघले पुरानो निर्माणका लागि एक वर्ष म्याद थप्न, एक वर्षदेखि भुक्तानी नभएको रकम तत्काल भुक्तानी दिनसमेत माग गरेको छ । उक्त नियमावलीमा कालोसूचीमा परेका कम्पनीका आंशिक स्वामित्व रहेका नयाँ फर्म, कम्पनीले बोलपत्र पेश गर्न नसक्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै, औसत वार्षिक कारोबार चार गुणा हुनेले मात्रैले बोलपत्र लिनसक्ने नियमावलीको नयाँ व्यवस्था छ । व्यवसायीहरूले यसलाई लागू नगर्न माग गरेका छन् । भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भएका कम्पनीलाई मूल्यांकन र खरीद प्रक्रियाबाटै हटाउने प्रावधान नियमावलीमा छ । महासंघले रू. ५ करोडसम्मको खरीदमा योग्यता नै नतोक्न सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, निर्माणको काम सम्पन्न गर्न ५० प्रतिशत अर्थात् एक वर्षसम्म मात्रै म्याद थपिने प्रावधानको पनि उनीहरूले विरोध गरेका छन् । म्याद थपको सीमाले १४ हजार २३७ ओटा आयोजना प्रभावित हुने महासंघको ठहर छ ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले निर्माण क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता भए पनि यो नियमावलीले व्यवसायीलाई पलायन गराउने बताए । अवैज्ञानिक ढंगले आएको अहिलेको नियमावलीले निर्माण व्यवसायीलाई मात्र नभएर सिमेन्ट, फलामे डण्डी उद्योगलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने पाण्डेले बताए ।
महासंघका सल्लाहकार रमेश शर्माले स्वदेशी व्यवसायीहरूलाई टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिनै नसक्ने प्रावधानले विदेशी व्यवसायीलाई पोस्न खोजेको आरोप लगाए । कार्यक्रममा महासंघका सल्लाहकारहरू जयराम लामिछाने, यक्षध्वज कार्की, महासंघका उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा (एडी), महासचिव रोशन दाहाल लगायतले धारणा राखेका थिए ।
महासंघले उक्त नियमावली संशोधन तथा खारेज नगरे सरकारी निकायहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, निर्माण व्यवसायीका इजाजत पत्र सरकारलाई बुझाउने, बोलपत्रहरू बहिष्कार गर्ने, विकास निर्माणका काम रोकी हेभी यन्त्रहरू सडकमा राख्ने जस्ता विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।